Zato Taona Lasa Izay: 1915 | Tantaran’ny Vavolombelona | Diary 2015
HOY Ny Tilikambo Fiambenana 1 Martsa 1915: “Fotoam-pitsapana izao diavintsika izao. Inona moa no nahatonga antsika hafana fo taloha? Noho ilay zavatra nantenaintsika tamin’ny 1914 fotsiny ve, sa noho isika tsy te hivadika mihitsy sady tia an’ny TOMPO sy ny Hafatra notoriny ary ireo rahalahintsika?” Diso fanantenana ny Mpianatra ny Baiboly sasany tamin’ny 1915, ary niady mafy mba handresena an’izany fihetseham-po izany. Niady koa izao tontolo izao tamin’io, saingy ady hafa mihitsy ny azy.
Nafotaka ny Ady Lehibe I eran’i Eoropa. Fitaovam-piadiana arifomba indray no nampiasaina, ka sivily tsy hita isa no nitondra faisana. Nihaodihaody nanodidina an’i Grande-Bretagne, ohatra, ny sambo mpisitrika alemà, tamin’ny 1915. Notifirin’ny iray tamin’izy ireo ny sambon’ny Anglisy atao hoe Lusitania, tamin’ny 7 Mey 1915. Rendrika io sambo mpitondra mpandeha io, ka 1 100 mahery no maty.
Tsy te handray anjara tamin’io ady io ny Mpianatra ny Baiboly. Tsy azon’izy ireo tsara anefa ny tena dikan’ilay hoe tsy anisan’izao tontolo izao. Marina fa tsy nanolo-tena hanao miaramila izy ireo. Nisy ihany anefa nandeha rehefa voantso, fa nitady asa tsy nifandray tamin’ny ady fotsiny. Nandeha koa ny sasany rehefa noterena ho any an’ady, fa nieritreritra hoe hampandaloviny eo ambony tampon-dohan’ny fahavalony fotsiny ny bala rehefa mitifitra izy.
Navoaka tao amin’ny Tilikambo Fiambenana 15 Jolay 1915 ny tantaran’ny miaramila hongroà iray. Naratra izy io ary natao batisa rehefa nihasitrana. Niverina tany an’ady indray anefa izy taorian’izay. Hoy ilay gazety: “Nanatona akaiky kokoa ry zareo [ny miaramila hongroà], ka 250 metatra teo ho eo ny elanelan’izy ireo sy ny miaramila rosianina. Nahazo baiko izy ireo avy eo hoe ‘raikitra ny ady.’ ” Benitra no nampiasaina tamin’izay. Tsy inona izany fa basy lava nasiana antsy teo amin’ny lohany. “Tany amin’ny farany ankavia no nisy an’ilay rahalahy hongroà. Niezaka niaro tena fotsiny izy, ka nataony izay hampilatsaka an’ilay benitra teny an-tanan’ilay Rosianina nifanandrina taminy. Hitany anefa hoe nanao hoatran’izany koa ilay Rosianina ... Navelan’ilay Rosianina nilatsaka tamin’ny tany ny benitra teny aminy, dia nitomany izy. Nodinihin’ilay rahalahy hongroà tsara avy eo ilay ‘fahavalony’, ary gaga izy nahita ‘lakroa misy satroboninahitra’ nipaingotra teo amin’ny akanjony. Hay rahalahy ao amin’ny Tompo koa ilay Rosianina!” *
Nivoaka tao amin’ny Tilikambo Fiambenana 1 Septambra 1915 ilay lahatsoratra hoe “Inona no Tokony Hataon’ny Kristianina Rehefa Misy Ady?” Nohazavaina tao ny tena dikan’ilay hoe tsy anisan’izao tontolo izao. Hoy izy io: “Izay miditra ho anisan’ny tafika sy manao fanamian’ny miaramila, dia manaiky hiantsoroka ny andraikitra sy adidin’ny miaramila araka ny lamina efa mipetraka. ... Dia hety amin’ny Kristianina ve ny hanao an’izany?” Nazava ihany, tatỳ aoriana, hoe tsy tokony handray anjara amin’ny ady mihitsy ny Kristianina.
Fiovana tao amin’ny foibe
Nilazana ny Betelita 70 tao amin’ny Betelan’i Etazonia tamin’ny 1915, fa tsy maintsy halefa hiasa eny amin’ny saha izy ireo. Tsy naharaka intsony mantsy ny vola. Izao no nolazaina tamin’izy ireo: “Tsy maintsy mampihena ny fandaniana isika. Tsy tokony hidi-trosa mantsy isika, nefa tsy tiantsika koa raha tsy mandeha tsara ny asa amin’ny ankapobeny.”
Nanao sonia taratasy iray avy amin’ireo “Fitopolo Niala” ny Rahalahy Clayton Woodworth sy ny rahalahy roa hafa. Navoaka tao amin’ny Tilikambo Fiambenana 1 Mey 1915 io taratasy io. Nilaza ireo olona ireo tao amin’ilay taratasy fa “tena faly izy ireo fa efa mba anisan’ny ‘Mpianakavin’ny Betela’ ary nankasitraka an’ireo fitahiana sy tombontsoa be dia be azony tamin’izany.”
Tsy mora tamin’izy ireo ilay fiovana, nefa izany koa no nahafahany nanaporofo hoe tena tsy nivadika tamin’Andriamanitra izy ireo. Nanohy nitory foana ny Rahalahy Woodworth. Lasa Betelita indray izy, tatỳ aoriana, ary izy no lasa mpampanonta voalohany an’ilay gazety hoe Fotoam-pahasambarana, na Mifohaza! ankehitriny. Nanomboka tamin’ny 1919 ka hatramin’ny 1946 izy no nanao izany.
Fanompoana azo hararaotina
Nampirisihin’ny Tilikambo Fiambenana ireo rahalahy mba hanohy hitory, na mafy aza ny fiainana. Natao koa izay hanampiana an’ireo efa nampiseho fahalianana. Hoy Ny Tilikambo Fiambenana 15 Desambra 1915: ‘Nisy olona avy any amin’ny faritra samihafa nangataka gazety, ary manana ny lisitry ny anaran’izy ireo izahay. Tokony hotsidihina izy ireny sao dia lasa varimbariana.’ Ny hahatonga azy ho liana indray no tanjona, ka lasa “hafana fo hanompo an’Andriamanitra” izy ireo sady “ho tena tia ny Fahamarinana.”
Nila nifantoka tamin’ny tombontsoan’ilay Fanjakana foana ny Kristianina tamin’izany, toy ny ankehitriny ihany. Hoy Ny Tilikambo Fiambenana 15 Febroary 1915: “Tokony hazoto sy hafana fo amin’ny fanompoana an’Andriamanitra isika, raha mifoha ara-panahy.” Tena nila niambina ny mpanompon’Andriamanitra. Hoy ihany ilay gazety: “Tsy maintsy miambina isika. Miambina inona anefa? Ny tenantsika aloha voalohany indrindra. Amin’izay isika tsy ho voan’ny vela-pandrika misy eto amin’ity tontolo ity.”
Nalaina avy tao amin’ny Romanina 4:20, tao amin’ny Dikan-tenin’ny Mpanjaka Jacques, ny andinin-teny ho an’ny taona 1916, izay nampirisika ny mpanompon’i Jehovah mba “hatanjaka amin’ny finoana.” Tena nampahery an’ireo olona tsy nivadika io andinin-teny io, satria nisy fitsapana mafy tamin’izay.
^ feh. 4 Nanapaingotra lakroa misy satroboninahitra teo amin’ny akanjony ny Mpianatra ny Baiboly, nandritra ny taona maro, mba ho famantarana azy. Hita teo amin’ny pejy voalohany amin’ny Tilikambo Fiambenana koa io famantarana io. Tsy nampiasa azy io intsony anefa ny Vavolombelon’i Jehovah taorian’ny 1930.